ट्रम्पदेखि मोदीसम्म, यी चर्चित हस्तीहरु कस्तो र कुन फोनको प्रयोग गर्छन त ?
फागुन ०८, २०७४ बिगुल न्यूज - DG
काठमाडौँ:- स्मार्टफोन टेक्नोलोजी क्षेत्रको एक उन्नत उत्पादन हो, दोस्रो कुनै पनि ग्याजेट्सको लागि यो एक उदाहरण हो। पछिल्लो समयमा बजारमा विभिन्न ब्रान्डका स्मार्टफोनहरु लगातार आईरहेका छन्। यस्तोमा प्रयोगकर्ताहरूको दिमागमा सधैं सवाल आउन सक्छ कि आफूले फलो गर्ने र दैनिक जस्तो सुनिरहेका चर्चित हस्तीहरुले कस्ता फोनको प्रयोग गर्छन त। आज हामी तपाईलाई केही चर्चित हस्तीहरुले प्रयोग गर्ने फोनका बारेमा बताउन गईरहेका छौँ….
नरेन्द्र मोदी : – भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतको लोकप्रिय नेताहरुमध्ये एक हुन्, उनको प्रविधिमा निकै लगाव रहेको छ। प्रम मोदीलाई अक्सर सुनौलो र महत्वपूर्ण क्षण आफ्नो फोनको क्यामरामा कैद गरेका देख्न सकिन्छ। वास्तवमा भन्दा गलत नहोला कि प्रम मोदीले नै भारतमा सेल्फीको प्रचलन ल्याएका थिए। प्रम मोदीलाई प्राय: आईफोन प्रयोग गरिरहेका देख्न सकिन्छ। प्रम मोदी आईफोन ६ को साथ धेरै स्थानहरुमा देखिनुभएको थियो।
डोनाल्ड ट्रम्प : – संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई एन्ड्रोइड फोन प्रयोग गरिरहेका देखिएको थियो। एक खबर अनुसार डोनाल्ड ट्रम्पलाई स्यामसुंग ग्यालेक्सी एस ३ प्रयोग गरिरहेको पाईएको थियो तर हालै प्रकाशित समाचार अनुसार उनलाई आईफोन प्रयोग गर्न सुरु गरेका बताएका छन्। यद्यपि यस समाचारको अहिलेसम्म कुनै पुष्टि भएको छैन।
बाराक ओबामा : – अमेरिकी पुर्व राष्ट्रपति र नोबेल पुरस्कार बिजेता बाराक ओबामा आफ्नो कार्यकालमा ब्ल्याकबेरी फोनको प्रयोग गर्थे।
किम जोंग उन : – उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति किम जोंग उनलाई अक्सर मिसाइलको प्रक्षेपणमा खुसीसाथ हेर्दै गरेको देखिन्छ। तर फोनको बारेमा कुरा गर्दा किम जोंग उन एचटिसी बटरफ्लाई प्रयोग गर्छन। यो फोन एचटिसी वान कम्पनीको लिमिटेड एडिसन फ्ल्यागशिप फोन हो।
प्रकाशित : मङ्गलबार, फागुन ०८, २०७४१५:५९
कान्समा दोस्रो दिन ऐश्वर्या: छोरीलाई किस गर्दै राजकुमारी झैँ देखिईन सिल्वर गाउनमा!
एमाले नेता खनालको हृदयाघातका कारण मृत्यु
पीडालाई शब्दमा ढालेर सहानुभूतिको व्यापार : १.४५ बजे हेलिकप्टर दुर्घटना, ४ बजे कविता ?
सिरिया संकटः राहतको बदलामा ‘सेक्स’,टार्गेटमा ‘विधुवा’ र ‘डिभाेर्स’ युवती
निर्मलालाई न्याय माग गर्दै पोस्टर टाँस्न धनगढी पुगिन् हिसिला यमी !